हामीले शिवलाई कुन फूलहरू चढाउनु पर्छ? - PAMPEREDPEOPLENY.COM - योग-आध्यात्मिकता
हामीले शिवलाई कुन फूलहरू चढाउनु पर्छ?
वित्त उच्च लाभांश यील्ड स्टक सही विकल्प नहुन सक्छ: यहाँ किन हो
चलचित्रहरू सारा अली खान उनको हिमाली एडभेन्चरहरू उनकी आमा अमृता सिंहसँग साझेदारी गर्दै अमिल्छिन्
टेक्नोलोजी OneWeb ले कजाकिस्तान सरकारसँग ब्रॉडबैंड सेवा प्रस्ताव गर्न सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्‍यो
समाचार पश्चिम बंगाल चुनावः आयोगले भाजपा नेता राहुल सिन्हालाई 48 hours घण्टा प्रचार गर्न प्रतिबन्ध लगायो
खेलकुद आईपीएल २०२१: सak्गीतको अन्तिम बलमा स्ट्राइक कायम गर्ने निर्णयलाई संगकाराले समर्थन गरे
अटोमोबाईलहरू यामाहा एमटी -१ D डुअल-च्यानल एबीएसको साथ चाँडै मूल्य फेरि सेट गर्न सुरु हुनेछ
घर योग आध्यात्मिकता विश्वास रहस्यवाद विश्वास रहस्यवाद oi-Renu द्वारा रेणु अगस्त August, २०१ on मा सावनमा शिवलाई यी flowers वटा फूलहरू चढाउनुहोस्, सबै इच्छा पूरा हुन्छ। भगवान शिवलाई अर्पण गर्न फूल बोल्डस्की
श्रावण महिना भगवान शिवलाई समर्पित छ। भक्तहरूले उहाँलाई सम्पूर्ण समर्पणका साथ पूजा गर्छन् र उनीहरूको चाहनाको पूर्तिको खोजी गर्छन्। उपवास बसेदेखि मन्दिरको भ्रमणसम्म, भक्तहरूले देवतालाई खुशी पार्न यथाशक्य प्रयास गर्छन्। हामी मध्ये धेरैले सुनेका थियौ कि भगवान शिव न्यूनतम भेटीको साथ प्रसन्न हुन सक्छन्। तर, यो पनि भनिन्छ कि व्यक्तिले शिवलाई केही फूलहरू अर्पण गरेर उसको सबै इच्छाहरू प्राप्त गर्न सक्छ। आज हामी तपाईंलाई केहि फूलहरू भन्न लाग्दैछौं जुन तपाईंले शिवलाई उनको आर्शिवादका लागि चढाउनु पर्छ।
'वाहन सुख' (विलासिता र वाहनहरू) को लागि
वाहन सुखाले जन्म चार्ट (योग) मा भएको घटनालाई जनाउँछ जसको कारणले एक व्यक्तिलाई सवारी साधनको सुविधा प्राप्त हुन्छ। चाहे ऊ आफैंमा सवारी छ वा छैन, ऊ सँधै आरामदायी यात्राको आनन्द लिन्छ, साथीहरू वा परिवारको सहयोगमा, आफ्नै प्रयास बिना। अन्य मामिलाहरूमा, जब यो योग आफ्नो जन्म चार्टमा छैन, व्यक्ति एक गाडी किन्न सक्षम हुँदैन कि त ऊ बचत गर्न सक्षम छैन, वा केही अन्य समस्याका कारण। वाह्न सुख योगका साथ आशीर्वाद पाउन, तपाईंले शिवलाई चमेलीको फूलहरू चढाउनु पर्छ। यो मात्र होईन, यसले भौतिकवादी संसारमा हामीले सामना गरिरहेका विभिन्न समस्याहरूबाट पनि राहत पाउँदछ।
कसरी कपालमा बियर लगाउने
धन वैभव (धन कमाउन)
धन वैभव भनेको जन्म चार्टमा योग हो जुन कुनै व्यक्तिको जीवनमा धनको आगमन हुन्छ। शंखपुष्पी, बेलपत्र (बिल्वा पातहरू) र शिवलाई कमलको फूल प्रदान गर्नुहोस्। यदि ताराहरू पहिले नै तपाईंको पक्षमा छन् भने यसले धनी बन्ने संभावनालाई बढाउँदछ। र तिनीहरूलाई अनुकूल बनाउँदछ यदि तिनीहरूले तपाईंलाई अन्यथा समृद्धि गर्न मद्दत गर्दैनन्। शिवलाई चढाइएको बिल्वा पातले बढी धन कमाउन सहयोग गर्दछ। शिवलाई चमेली (जुही) फूल चढाएमा यसले घरलाई समृद्धि, पर्याप्त सम्पत्ती र बासिन्दाहरूको लागि खानाले भरिन्छ।
प्रारम्भिक विवाहको लागि
विवाह ढिलाइ हुनुका थुप्रै कारणहरू हुन सक्छन्। शिवलाई बिलवा पुष्प (बेल पुष्पा) चढाउँदा व्यक्तिको विवाहको लागि राम्रो अवसरहरू सिर्जना हुन्छ। जबकि केहि व्यक्तिहरूले उपयुक्त खेल भेट्टाउन सक्षम नहुन सक्छन्, अरुले विवाहको लागि उपयुक्त मितिहरू फेला पार्न सक्षम नहुन सक्छन्। बेल पुष्पा प्रस्ताव गर्नाले समस्या समाधान हुनेछ। यससँगै, दम्पतीको बीच अनुकूलता बढ्छ।
डिप्रेसन हटाउनका लागि
सबै प्रकारका ठूला र साना समस्याहरू आधुनिक जीवनमा सामान्य छन्। यद्यपि समस्याहरू जीवनको अनिवार्य अंश हुन्, किनकि ती सफलताका लागि पाइलाहरू हुन्। तर तिनीहरूलाई कहिलेकाँही ह्यान्डिल गर्न कठिन काम हुन्छ र हामी डिप्रेशनमा पर्दछौं। जीवनबाट यस्ता समस्याहरू सजिलै हटाउनको लागि कसैले भगवान शिवलाई सफाली (राती फूलेको चमेली) फूल चढाउनु पर्छ।
सामाजिक सम्मान कमाउन
सम्मान र उच्च पदनाम कमाउनको लागि, भगवान शिवलाई अगष्टको फूल चढाउनु पर्छ। शिवलाई कास्केला (कानेर) चढाएमा सफलताको मार्गमा आउने अवरोधहरू पनि हटाइन्छ। ती कपडा र गहना चाहनेहरूले शिवलाई कानेर फूलहरू चढाउनुपर्दछ।
के हुन्छ यदि कुनै महिलाले भेग्रा लिन्छ भने
एक स्वस्थ लामो जीवन को लागी
भनिन्छ कि जसले श्रावणमा भगवान शिवलाई दुर्वा घाँस (बर्मुडा घाँस) प्रदान गर्दछ, उसको स्वास्थ्य लामो आयु हुन्छ।
जिन्दगीमा शान्ति र मृत्यु पछि शान्तिको लागि
व्यक्तिले वर्तमान जीवनमा शान्ति प्राप्त गर्दछ र भगवान शिवलाई सेतो कमल चढाएर मृत्यु पछि मुक्ति पाउँछ।
रोंगाली बिहु: असमिया महोत्सव
तिरुक्कुरल - सद्गुण-पारिवारिक जीवन-कुराल 45 45
डालिया उपमा: वजन घटाउन ब्रेकफास्ट
कुन चाहिँ राम्रो छ? नियमित कफी वा कालो कफी
डन्ड्रफको लागि बेकिंग सोडा प्रयोग गर्ने तरिकाहरू
डिज्नी चुरो रेसिपी: कसरी तपाईंको घरमा यी स्वादिष्ट खाजा बनाउने
करवा चौथ २०१ 2019: अविवाहित केटीहरूका लागि भ्राट, मुहूर्ता र पूजा विधि
सुख्खा हातहरूको उपचार र रोक्नको लागि १ Home घरेलु उपचार
विद्या सिन्हालाई सम्झँदै सबैभन्दा लोकप्रिय साडी उनको फिल्मबाट देखिन्छ
१० विश्वका सब भन्दा महँगो बियरहरू
यी चराहरू र पशुहरू ज्योतिष अनुसार तपाईंको घरमा प्रवेश गर्नु हुँदैन
बधाई सन्देश र एक बच्चा केटी को जन्म मा साझा गर्न को लागी शुभकामना
हल्दी र अनुहार को लागि दूध क्रीम
कसरी छालाबाट कपाल हटाउने
किन हामीले गणेश चतुर्थीमा चन्द्रमा देख्नु हुँदैन?
गुढी पाडवा २०२० छवि माराठीमा
एक महिनामा पेटको बोसो घटाउनुहोस्
दैनिक अनुहारमा हल्दी कसरी लगाउने